> Resource > Utility > "Screen Black" on xawaaladaha (Windows 7, XP & Vista)
Screen ku sii hayaan madow ee xawaaladaha?
Marka aan bilaabay ilaa walba computer aan u muuqata in ay ganaax ka shaqeeya, laakiin muddo ka dib, shaashadda kombiyuutarka ee jirsado madow, iftiinka awood weli cagaaran. Haddii aan furmaan oo isu bedeli on mar kale, shaashada (mar kale) bilaabo ilaa, ka dibna (mar kale) ka dib markii dhowr ilbiriqsi, la xidho. Anigu ma isticmaali karaa hadda computer, xitaa hab ammaan ah. Talo kasta?
Waxa ugu horreeya ee aad samayn lahayd marka aad la kulantid tani waa biiray hab nabad ah, hubin inaad u hagaajin karaa screen this madow. Ka dib oo dhan, waxaad ka heli kartaa qaar ka mid ah jeegga computer iyo dayactirka utilities waxaa, taas oo noqon lahayd caawin in aad si. Tusaale ahaan, qaar ka mid ah shaashadda madow ee xawaaladaha waxaa keena drive, oo aad si fudud inaan ku saxno kartaa adigoo la xariirta. Maxaa dhacaya haddii ay tani caawin waydo ama xataa aadan heli karaa hab amaan ah? Sida caadiga ah, waxay ku saabsan tahay dhibaatada diiwaanka nidaamka aad. Waxaad u baahan tahay qalab adeeg oo kabaha your computer iyo wax ka qaban.
Wondershare LiveBoot Boot CD / USB doorasho wanaagsan, kuwaas oo kaa caawin kara inaad si guul kabaha your computer. Ka dib markii in, waxaad u isticmaali kartaa si uu u xaliyo your computer shaashadda madow ee xawaaladaha ee qasabno yar keligaa, xitaa aad tahay laylis computer ah.
La soo iibiyo barnaamij ugu horeysay, ka dibna waxaad heli doontaa xeerka diiwaangelinta iyo link download barnaamijka a. Download oo ku xidh on a computer-wanaag shaqo. Markaas raac tallaabooyinka hoose si ay u abuuraan kuu gaar ah Downlaods CD ama USB drive iyo hagaajin your computer shaashadda madow on boot in daqiiqo.
3 talaabooyin lagu xalinayo your computer shaashadda madow ee xawaaladaha
First of dhan, waxaad u baahan tahay in la abuuro Downlaods CD ama USB drive ah si aad computer si habsami leh. Orod barnaamijka iyo waxaad heli doontaa interface kii saaxir ah soo socda. Geli CD maran ama USB drive galay computer iyo riix badhanka gubashada ee interface ka. OK hadda, shaqadaada loo qabto. Waxa bidix si toos ah ayaa waxaa dhammaan doona barnaamijka, iyo waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad qaadato oo aad CD Downlaods / USB drive markii habka la soo gabagabeeyo.
Step2. Boot your computer shaashadda madow
Hadda, aad gelin kara drive ee CD / USB Downlaods galay your computer shaashadda madow oo guuleysatey. Markan, ha ku bilaabatay computer sida caadiga ah, waxaad u baahan tahay in si degdeg ah F12 miiran marka nidaamka bilaabmin loading. Markaas waxaad heli doontaa galay Menu Device Boot ah. Dooro "suuro ama USB CD-ROM Drive" waxa ka yar iyo waxaad heli doontaa menu a soo socda. Dooro "Boot ka LiveBoot" si ay u helaan your computer.
Step3. U dayactir shaashadda madow ee xawaaladaha
Marka aad hesho your computer, Wondershare LiveBoot 2012 si toos ah u ordi doonaa. Tag ah "Windows Recovery" iyo dooran "Boot Shil Xalka". Halkan waxaad ka heli doontaa qaar ka mid ah symtoms ku saabsan computer shaashadda madow iyo sababaha aad sababta your computer jirsado shaashadda madow ee xawaaladaha. Raadi mid ka mid ah ku tilmaamay waxa aad hadda shirka iyo raac xal u dhigma hoose si aad u hagaajin aad arrinta.
Marka dhibaato ma guurtada ah, qaado ka baxay LiveBoot CD / USB drive ka your computer, iyo guuleysatey kombiyuutarka. Markaas waxaad ka heli doontaa in aad kabaha kartaa your computer si guul leh.
Habka ugu fudud ee dayactir fariisiyo Laptop
Sida loo Password ilaali Excel 2010/2007/2003